Fanadihadiana an-dRasoamaromaka Hery : itsabahan’ny resaka politika ny tontolon’ny fitsarana | NewsMada
Fanadihadiana an-dRasoamaromaka Hery : itsabahan’ny resaka politika ny tontolon’ny fitsarana
Mbola eo hatrany ny tsindry politika. Nahemotra anio, ny fanadihadian’ny etsy amin’ ny Toby Ratsimandrava ny sekretera nasionalin’ny Mapar, Rasoamaromaka Hery .
“Tsy salama ny tenany ka tsy afaka. Hiverina aty izahay rahampitso (anio). Tsy fantatray aloha ny mpitory hatreto”, hoy ny mpisolovava nisolo tena azy, ny Me Harivola, omaly. Voarain’izy ireo ny asabotsy teo ny taratasy fiantsoana.
Voalaza fa anisan’ny antony fiantsoana ny fampihorohoroana sy fandrahonana am-bava nataon’ity olon’ny Mapar ity tamin’ny loholona Rakotovazaha Olivier, mpitory tamin’ireny fotoana nakana ny mpiasan’ny minisitera ireny. Anisan’izany ny tao amin’ny biraon’ity loholona MFM/HVM ity.
Araka izany, hita taratra ny fitanilana sy ny fidiran’ny resaka politika hatrany eny amin’ny tontolon’ny fitsarana. Tokony handeha mifanaraka amin’ny fotoana nahatongavany avokoa ny raharaham-pitsarana na fanadihadiana. Herintaona katroka izao ny nitorian’ny SMM ny loholona Andriamandavy Riana tamin’ny fandrahonana ho faty ny mpitsara sy ny korontana notarihiny teny amin’ny Bianco. Nalaina am-bavany ireo mpitory, saingy tsy ny nisy tohiny intsony aty aoriana. Tahaka izany koa, iray volana katroka ny tifitra nahafaty olona tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey. Efa nitory ny depiote 73. Tsy nisy valiny. Ity anefa izao, haingana be ny fiakaran’ny raharaha eny anivon’ ny mpanao famotorana. Satria voakitikitika ny olon’ny fitondrana ? Mbola hampiantsoina koa ny depiote Razafimamantsoa Hanitra, Tody Arnaud… Tokony hitovy ny rehetra manoloana ny lalàna. Voaporofo izany izao fa fitsarana politika ny misy eto…